အရမ်းကောင်းတယ် ဖတ်ပြီးရင် ရှယ်လိုက်ပါ အမေ့ကို အာခံ၍ ပြန်မပြောခင် – Let Pan Daily
တစ်ခုသော နံနက်ခင်းအထက်တန်းကျောင်းသား အရွယ်ကောင်လေး တစ်ယောက်အားအိပ်ယာမသိမ်းမိလို့မိခင်ဖြစ်သူက”ထမင်းစားချိန်မှန်းလဲမသိအပြင်ထွက်လည်းမိဘဆီ ခွင့်မတိုင်ကြည့်စမ်း ဘယ်အချိန်ရှိနေပြီလဲတစ်နေကုန် ဂိမ်းဆော့နေ. . .”အစရှိသဖြင့်ဆူပူကြိမ်းမောင်းကာသားဖြစ်သူကသီးမခံနိုင်လို့
“ဟာဗျာ…အမေကလည်းကျနော်က ကလေး မဟုတ်တော့ဘူးတစ်နေ့လုံး ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်နဲ့နားငြီးတယ်…ကျနော့်ဟာ ကျနော် ကြိုက်သလိုနေပေါ့အမေမစပ်စုချင်ပါနဲ့…”လို့ သူ့အမေကိုအသံကြီးဟစ်ကျယ်နဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်…
အမေကတစ်လှည့်သားကတစ်လှည့်စကားများကြရာက အနီးအနားမှာထိုင်နေတဲ့အဖေဖြစ်သူကကြားပြန်ဖြေတဲ့အနေနဲ့သူ့သားကိုခေါ်လိုက်ပါတယ်။”သားရေ…အဖေ့ဆီလာပါဦးကွာ”သားဖြစ်သူကခြေဆောင့်ရင်းအိမ်ပေါ်ကနေဆင်းသွားပြီးအဖေခေါ်ရာကိုလိုက်ခဲ့ပါတယ်…အဖေဖြစ်သူကသားပခုံးကို လှမ်းဖက်ရင်းအပြင်ဘက်ကို လမ်းလျှောက် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။
“သား..ဘာဖြစ်လို့အမေ့ကိုပြန်ပြောနေရတာလဲ””အဖေ ကလည်းကျနော်က ကလေးမှမဟုတ်တော့တာနေ့တိုင်းလိုလို ကျနော့်ကိုအပြစ်မြင်နေတယ်နေ့တိုင်း ဆူပူနေတယ်ကျနော် ဒီအိမ်မှာ မနေချင်တော့ဘူးဖေဖေရယ်”
“အော်..သားကမေမေ့ဆို ဆုံးမစကားတွေဆူတယ်လို့ ထင်နေတာကိုးမေမေ မဆူအောင်မေမေ့ပြောတဲ့အတိုင်းငါ့သားနေပေါ့ကွ””ဖေဖေလည်း မေမေ့လိုပဲသားကို မချစ်ဘူးပေါ့ “”မဟုတ်ပါဘူးသားရယ်ဘယ်မိဘကမှ ကိုယ့်သားသမီးကိုလမ်းမှားမရောက်စေချင်ဘူးကြိုတင်တားဆီးတဲ့အနေနဲ့ပြောဆိုဆုံးမနေတာ”
“တော်ပြီ..ဖေဖေလည်းမေမေ့ လိုပဲသားကို အကောင်းမမြင်ဘူးဆူဖို့ပဲ””ကဲ ဖေဖေတစ်ခုပြောမယ်သေချာနားထောင်””ဘာပြောမှာလဲဖေဖေသားနားထောင်နေတယ်””သားက မေမေ့ကိုတစ်ခွန်းမကျန်အာခံပြန်ပြောတယ်နော်သားသေချာစဉ်းစား”
“သား ပြန်ပြောမှာပေါ့ဖေဖေနေ့တိုင်း ဗျစ်တောက် ဗျစ်တောက်ဆိုတော့ သား နားငြီးတယ်”ကဲ ဒါဆိုဖေဖေ အချက် ၁၀ ချက်ပြောပြမယ်အဲဒီအချက် ၁၀ ချက်လုံးသားလိုက်နာနိုင်ရင်သားမေ့မေ့ကို ကြိုက်သလိုအာခံပြီးပြန်ပြောလို့ရပြီ””ပြောပါ ဖေဖေ သားနားထောင်ပါ့မယ်””ဒါဆိုသေချာနားထောင်
၁။ သုံးလတိတိ သားထမင်းစားပြီး တိုင်းအန်နိုင်မလား ၊
၂။ သားရဲ့ဝမ်းဗိုက်ထဲဘောလုံးထည့်ပြီးကြီးမားလာအောင် တစ်လတစ်ခါရေ ထိုးသွင်းမယ် တစ်ဆယ်လတိုင်တိုင်သားအလေးခံပြီး သယ်ထားနိုင်မလား ၊
၃။ ကော်ဖီ ၊ လက်ဖက်ရည် ၊ကိုယ်ကြိုက်တဲ့မုန့် အစားအစာတွေ မစားပဲ ခြောက်လတိုင်တိုင် အငတ်ခံနေနိုင်မလား ၊
၄။ ညည အိပ်ရင်လည်းဗယ်ညာ မစောင်းပဲငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ ၅ လတိုင်တိုင် အိပ်နိုင်မလား ၊
၅။ ၈ လတိုင်တိုင် ဆော့ကစားတာတို့ လျှောက်လည်တာတို့ ကခုန်တာတို့မလုပ်ပဲ အိမ်ထဲမှာပဲ နေနိုင်မလား ၊
၆။ နာဖျားလို့မရှိအောင်ကိုယ့်ကို ဂရုစိုက်နေရလို့ကြိုက်တဲ့ အစားအသောက်တွေမစားပဲနေမယ်နာဖျားခဲ့ရင်တောင် ဆေးတွေစိတ်ကြိုက်စားခွင့်မရှိပဲ၁၀ လအထိ သားနေနိုင်လား ၊
၇။ ၁၄ နာရီအကြာအသက် နဲ့ ရင်းပြီးနာကျင် ကိုက်ခဲတဲ့ ဝေဒနာသားခံနိုင်မလား ၊
၈။ ကိုယ့်နို့သီးခေါင်းကို ကိုက်ရင်နာပေမယ့် ၁၀ လအထိ အောင့်အည်း သီးခံနိူင်မလား ၊
၉။ ချီးတွေ ၊ သေးတွေ ၊အန်ဖတ်တွေ ၂ နှစ်တိုင်တိုင်သားက ကြုံးနိုင်မလား ၊
၁၀။ ညညဆိုရင်လည်း နှစ်နာရီတစ်ခါ တစ်နှစ်လုံးလုံးအိပ်ရေးပျက်ခံပြီးထနိုင်မလား ။ကဲ…သား အဲဒီအချက်၁၀ ချက် လိုက်နာလို့နိုင်မလား…?
တစ်ကယ်လို့ သားက တစ်ချက်မကျန် လိုက်နာ နိုင်ရင်မေမေ့ကို ကြိုက်သလိုအာခံပြီးပြန်ပြောလို့နိုင်ပြီ”သားဖြစ်သူက ခေတ္တမှိုင်ပြီးအတွေးတစ်ခုဝင်လာကာ”ဟုတ်ကဲ့ဖေဖေသားနားလည်ပါပြီနောက်ဘယ်တော့မှမေမေ့ကိုရော ဖေဖေ့ကိုပါသားပြန်မပြောတော့ပါဘူးလို့သားကတိပေးပါတယ်ဖေဖေ”
“ကဲ..သားလိမ္မာလေးမေမေ့ကို ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးကန်တော့ လိုက်နော် “သားလိမ်မာသမီးလိမ္မာလေးဖြစ်ကြပါစေ ။
အရမျးကောငျးတယျ ဖတျပွီးရငျ ရှယျလိုကျပါ အမကေို့ အာခံ၍ ပွနျမပွောခငျ
တဈခုသော နံနကျခငျးအထကျတနျးကြောငျးသား အရှယျကောငျလေး တဈယောကျအားအိပျယာမသိမျးမိလို့မိခငျဖွဈသူက”ထမငျးစားခြိနျမှနျးလဲမသိအပွငျထှကျလညျးမိဘဆီ ခှငျ့မတိုငျကွညျ့စမျး ဘယျအခြိနျရှိနပွေီလဲတဈနကေုနျ ဂိမျးဆော့နေ. . .”အစရှိသဖွငျ့ဆူပူကွိမျးမောငျးကာသားဖွဈသူကသီးမခံနိုငျလို့
“ဟာဗြာ…အမကေလညျးကနြျောက ကလေး မဟုတျတော့ဘူးတဈနလေုံ့း ဗဈြတောကျဗဈြတောကျနဲ့နားငွီးတယျ…ကနြေျာ့ဟာ ကနြျော ကွိုကျသလိုနပေေါ့အမမေစပျစုခငျြပါနဲ့…”လို့ သူ့အမကေိုအသံကွီးဟဈကယျြနဲ့ပွနျပွောခဲ့တယျ…
အမကေတဈလှညျ့သားကတဈလှညျ့စကားမြားကွရာက အနီးအနားမှာထိုငျနတေဲ့အဖဖွေဈသူကကွားပွနျဖွတေဲ့အနနေဲ့သူ့သားကိုချေါလိုကျပါတယျ။”သားရေ…အဖဆေီ့လာပါဦးကှာ”သားဖွဈသူကခွဆေောငျ့ရငျးအိမျပျေါကနဆေငျးသှားပွီးအဖခေျေါရာကိုလိုကျခဲ့ပါတယျ…အဖဖွေဈသူကသားပခုံးကို လှမျးဖကျရငျးအပွငျဘကျကို လမျးလြှောကျ ထှကျခဲ့ပါတယျ။
“သား..ဘာဖွဈလို့အမကေို့ပွနျပွောနရေတာလဲ””အဖေ ကလညျးကနြျောက ကလေးမှမဟုတျတော့တာနတေို့ငျးလိုလို ကနြေျာ့ကိုအပွဈမွငျနတေယျနတေို့ငျး ဆူပူနတေယျကနြျော ဒီအိမျမှာ မနခေငျြတော့ဘူးဖဖေရေယျ”
“အျော..သားကမမေဆေို့ ဆုံးမစကားတှဆေူတယျလို့ ထငျနတောကိုးမမေေ မဆူအောငျမမေပွေ့ောတဲ့အတိုငျးငါ့သားနပေေါ့ကှ””ဖဖေလေညျး မမေလေို့ပဲသားကို မခဈြဘူးပေါ့ “”မဟုတျပါဘူးသားရယျဘယျမိဘကမှ ကိုယျ့သားသမီးကိုလမျးမှားမရောကျစခေငျြဘူးကွိုတငျတားဆီးတဲ့အနနေဲ့ပွောဆိုဆုံးမနတော”
“တျောပွီ..ဖဖေလေညျးမမေေ့ လိုပဲသားကို အကောငျးမမွငျဘူးဆူဖို့ပဲ””ကဲ ဖဖေတေဈခုပွောမယျသခြောနားထောငျ””ဘာပွောမှာလဲဖဖေသေားနားထောငျနတေယျ””သားက မမေကေို့တဈခှနျးမကနျြအာခံပွနျပွောတယျနျောသားသခြောစဉျးစား”
“သား ပွနျပွောမှာပေါ့ဖဖေနေတေို့ငျး ဗဈြတောကျ ဗဈြတောကျဆိုတော့ သား နားငွီးတယျ”ကဲ ဒါဆိုဖဖေေ အခကျြ ၁၀ ခကျြပွောပွမယျအဲဒီအခကျြ ၁၀ ခကျြလုံးသားလိုကျနာနိုငျရငျသားမမေ့ကေို့ ကွိုကျသလိုအာခံပွီးပွနျပွောလို့ရပွီ””ပွောပါ ဖဖေေ သားနားထောငျပါ့မယျ””ဒါဆိုသခြောနားထောငျ
၁။ သုံးလတိတိ သားထမငျးစားပွီး တိုငျးအနျနိုငျမလား ၊
၂။ သားရဲ့ဝမျးဗိုကျထဲဘောလုံးထညျ့ပွီးကွီးမားလာအောငျ တဈလတဈခါရေ ထိုးသှငျးမယျ တဈဆယျလတိုငျတိုငျသားအလေးခံပွီး သယျထားနိုငျမလား ၊
၃။ ကျောဖီ ၊ လကျဖကျရညျ ၊ကိုယျကွိုကျတဲ့မုနျ့ အစားအစာတှေ မစားပဲ ခွောကျလတိုငျတိုငျ အငတျခံနနေိုငျမလား ၊
၄။ ညည အိပျရငျလညျးဗယျညာ မစောငျးပဲငွိမျငွိမျလေးနဲ့ ၅ လတိုငျတိုငျ အိပျနိုငျမလား ၊
၅။ ၈ လတိုငျတိုငျ ဆော့ကစားတာတို့ လြှောကျလညျတာတို့ ကခုနျတာတို့မလုပျပဲ အိမျထဲမှာပဲ နနေိုငျမလား ၊
၆။ နာဖြားလို့မရှိအောငျကိုယျ့ကို ဂရုစိုကျနရေလို့ကွိုကျတဲ့ အစားအသောကျတှမေစားပဲနမေယျနာဖြားခဲ့ရငျတောငျ ဆေးတှစေိတျကွိုကျစားခှငျ့မရှိပဲ၁၀ လအထိ သားနနေိုငျလား ၊
၇။ ၁၄ နာရီအကွာအသကျ နဲ့ ရငျးပွီးနာကငျြ ကိုကျခဲတဲ့ ဝဒေနာသားခံနိုငျမလား ၊
၈။ ကိုယျ့နို့သီးခေါငျးကို ကိုကျရငျနာပမေယျ့ ၁၀ လအထိ အောငျ့အညျး သီးခံနိူငျမလား ၊
၉။ ခြီးတှေ ၊ သေးတှေ ၊အနျဖတျတှေ ၂ နှဈတိုငျတိုငျသားက ကွုံးနိုငျမလား ၊
၁၀။ ညညဆိုရငျလညျး နှဈနာရီတဈခါ တဈနှဈလုံးလုံးအိပျရေးပကျြခံပွီးထနိုငျမလား ။ကဲ…သား အဲဒီအခကျြ၁၀ ခကျြ လိုကျနာလို့နိုငျမလား…?
တဈကယျလို့ သားက တဈခကျြမကနျြ လိုကျနာ နိုငျရငျမမေကေို့ ကွိုကျသလိုအာခံပွီးပွနျပွောလို့နိုငျပွီ”သားဖွဈသူက ခတ်ေတမှိုငျပွီးအတှေးတဈခုဝငျလာကာ”ဟုတျကဲ့ဖဖေသေားနားလညျပါပွီနောကျဘယျတော့မှမမေကေို့ရော ဖဖေကေို့ပါသားပွနျမပွောတော့ပါဘူးလို့သားကတိပေးပါတယျဖဖေေ”
“ကဲ..သားလိမ်မာလေးမမေကေို့ ဝနျခတြောငျးပနျပွီးကနျတော့ လိုကျနျော “သားလိမျမာသမီးလိမ်မာလေးဖွဈကွပါစေ ။
ကိုဗဈရောဂါ ကို ဒေါကျတာ ဇျောဝစေိုး ထုတျ ပွောပွီ